Akụkọ Bible: Devid na Golayat - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
NDỊ Filistia bịara ọzọ ibuso Izrel agha. Ụmụnne atọ Devid ndị kasị okenye nọzi n’ụsụụ ndị agha Sọl. Otu ụbọchị, Jesi gwara Devid, sị: ‘Wegara ụmụnne gị mkpụrụ ọka na ogbe achịcha ụfọdụ. Chọpụtakwa otú ha na-eme.’
Mgbe Devid ruru ebe ndị agha ahụ nọ, ọ gbagara n’ọgbọ agha ahụ ịga hụ ụmụnne ya. Dike ndị Filistia bụ́ Golayat pụtara iji ndị Izrel mee ihe ọchị. Ọ nọwo na-eme nke a ụtụtụ na anyasị ruo ụbọchị iri anọ. O ji oké olu kwuo, sị: ‘Họpụtanụ otu onye n’etiti unu ibuso m agha. Ọ bụrụ na o merie wee tigbuo m, anyị ga-abụ ndị ohu unu. Ma ọ bụrụ na m merie wee tigbuo ya, unu ga-abụ ndị ohu anyị. M na-asị unu, họpụtanụ otu onye ibuso m agha.’
Devid wee jụọ ụfọdụ ndị agha ahụ, sị: ‘Gịnị ka a ga-enye onye ga-etigbu onye Filistia nke a wee wepụ ihere nke a n’ihu Izrel?’
‘Sọl ga-enye onye ahụ nnukwu akụ̀,’ ka otu onye agha sịrị. ‘Ọ ga-akpọnyekwa ya ada ya ka ọ lụọ.’
Ma ndị Izrel niile na-atụ Golayat ụjọ, n’ihi na ọ dị nnọọ ukwuu. O toro ogologo karịa rula itoolu (ihe dị ka mita atọ), o nwekwara onye agha ọzọ nke na-eburu ya ọta ya.
Ụfọdụ ndị agha jere gwa Eze Sọl na Devid chọrọ ibuso Golayat agha. Ma Sọl gwara Devid, sị: ‘Ị pụghị ibuso onye Filistia nke a agha. Ị ka bụ nwatakịrị, ma ya onwe ya anọwo na-ebu agha ná ndụ ya niile.’ Devid zara ya, sị: ‘Egburu m bea na ọdụm ndị buuru atụrụ nna m. Onye Filistia nke a ga-adị ka otu n’ime ha. Jehova ga-enyere m aka.’ Sọl wee sị ya: ‘Jee, ka Jehova nọnyekwara gị.’
Devid jere n’akụkụ iyi weta nkume ise na-akwọ mụrụmụrụ, tinye ha n’ime akpa ya. O wee were katapọọtụ ya jee izute dike ahụ. Mgbe Golayat hụrụ ya, ọ pụghị ikwere ihe anya ya hụrụ. O chere na ọ dị nnọọ mfe igbu Devid.
‘Naanị bịakwute m,’ ka Golayat kwuru, ‘m ga-ewerekwa ahụ́ gị nye anụ ufe na ụmụ anụmanụ ka ha rie.’ Ma Devid sịrị ya: ‘I ji mma agha na ube na-abịakwute m, ma mụ onwe m ji aha Jehova na-abịakwute gị. Taa ka Jehova ga-enye gị n’aka m, m ga-etigbukwa gị.’
Devid wee gbara ọsọ jekwuwe Golayat. O wepụta otu nkume n’akpa ya, tinye ya na katapọọtụ ya, were ike ya niile gbapụ ya. Nkume ahụ gbabanyere Golayat n’isi, o wee daa n’ala nwụọ! Mgbe ndị Filistia hụrụ na dike ha adawo, ha niile tụgharịrị ma gbaa ọsọ. Ndị Izrel chụwara ha wee merie n’agha ahụ.
Olee otú Golayat si maa ndị agha Izrel aka?
Olee otú Golayat gbaruru na dimkpa, gịnịkwa ka Eze Sọl kwere nkwa inye onye ga-egbu Golayat?
Gịnị ka Devid kwuru mgbe Sọl gwara ya na ọ gaghị alụsoli Golayat ọgụ n’ihi na Devid bụ obere nwa?
Olee otú Devid si gosi na ya tụkwasịrị Jehova obi site n’ihe ọ zaghachiri Golayat?
Dị ka ị pụrụ ịhụ na foto a, gịnị ka Devid ji gbuo Golayat, gịnịkwa mere ndị Filistia mgbe nke ahụ gasịrị?
Gụọ 1 Samuel 17:1-54.
Gịnị mere Devid atụghị egwu, oleekwa otú anyị pụrụ isi ṅomie obi ike ya? (1 Sam. 17:37, 45; Efe. 6:10, 11)
N’ihi gịnị ka Ndị Kraịst ji kwesị izere mmụọ ịsọ mpi dị ka nke Golayat mgbe ha na-eme egwuregwu ma ọ bụ na-enwe ntụrụndụ? (1 Sam. 17:8; Gal. 5:26; 1 Tim. 4:8)
Olee otú ihe Devid kwuru si gosi na o nwere okwukwe na Chineke ga-anọnyere ya? (1 Sam. 17:45-47; 2 Ihe 20:15)
Kama ịkọwa na agha ahụ bụ n’etiti ụsụụ ndị agha abụọ na-emegiderịta onwe ha, olee otú akụkọ a si gosi na agha ahụ bụ n’ezie n’etiti chi ụgha dị iche iche na ezi Chineke ahụ bụ́ Jehova? (1 Sam. 17:43, 46, 47)
Olee otú ihe ahụ fọdụrụnụ e tere mmanụ si eṅomi ihe nlereanya Devid bụ́ ịtụkwasị Jehova obi? (1 Sam. 17:37; Jer. 1:17-19; Mkpu. 12:17)
Gụọ akụkọ Devid na Baịbụl gị ka ị mụta ihe mere na ụjọ atụghị ya.